အခုမှ ထည်ထည် ဝင်ဝင်သိတယ် ဘာကြောင့် နွားသားကို အမဲသားလို့ ခေါ်ကြသလဲ.. – Han Nyein Oo
အခုမှ ထည်ထည် ဝင်ဝင်သိတယ် ဘာကြောင့် နွားသားကို အမဲသားလို့ ခေါ်ကြသလဲ..
အသားစားသတ္တဝါထဲ၌တွင်..သရဲ၊ သဘက် ဘီလူး၊ကျား၊ခြင်္သေ့..နှင့် တခြားသောမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာများမှာ အသားထဲ၌..နွားသာ ကိုသာ အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။
နွားသား၏ အနံ့မှာလည်းအညှီဆုံးဖြစ်သလို နွားသားစားခြင်းကြောင့်လည်းသွေးသား အားကောင်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ကြက်သေတော့.ကြက်သား ဝက်သေတော့/ ဝက်သားလို့ခေါ်ကြသည်မှာ အမှန်တိုင်းပင်ဖြစ်သော်လည်း နွားသေတဲ့အသားကျတော့..အမဲသားဟူ၍. ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာ.ထူးဆန်းလှသည့်အပြင် ဘာကြောင့်အဲဒီလိုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို မသိသူကများပါသည်
အမဲသားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာ မကောင်းသော.အမှောင်လောကသား တို့သာ ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်.စားကြသည်။မက်မောကြသ်ဖြစ်၍သာမှန်လူသားတို့အနေနဲ့ ဖြူစင်သန့်ရှင်းသောအသား မဟုတ်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ မသန့်ရှင်းဟုဆိုသည်မှာ ရွံစရာကောင်းအောင်ညစ်ပတ်နေသည်ဟု ပြောသည်မဟုတ်ပါ။ အကုသိုလ်တွေဖုံးလွှမ်းပေကျံနေသောကြောင့် မကောင်းဆိုးဝါးများသာ.နှစ်သက်သောကြောင့် မသန့်ရှင်း ၊မဖြူစင်ဘူးဟုဆိုပါသည်။
အမှောင်လောကသားတို့ ၊ပရလောကသားတို့ ကုသိုလ် နှင့် အကုသိုလ်ကို မသိနားမလည် မခွဲခြားတတ်သော၊ မလုပ်နိုင်သောသူတို့သာ စားမက်ဖွယ်ရာဟုသတ်မှတ်ထားသောအသားဖြစ်၍ အမဲသားဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ထို့သို့..အမဲသားကို.ကြိုက်နှစ်သက်သော စားသောက်ကြသော..သာမန်လူသားတို့တွင် ထိုသူတို့၏ခန္ဓာတွင်လည်းအင်မတန် ညစ်နွမ်းခြင်းအနံ့အသက်အညှီနံများ စွဲနေလေ၏။ မိမိကိုယ်မိမိမသိသော်လည်း အထက်မှာဖော်ပြထားသည့်..အမဲသားကိုမက်မော နှစ်သက်စွာ/
ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ာပရေလောကသားများ၊ ကျားရဲတိရိစ္ဆာန်များ၊ အစိမ်းသေ၊ သရဲ ၊သဘက်၊ ဘီလူးများ မှာ ထိုအသား၏အနံ့ကို.ယဉ်ပါးနေပြီဖြစ်၍ ထိုအသားကိုစားသောက်ထားသည့်သာမန် လူသားများကို အလွယ်တကူသိရှိကြ၏ အလှယျတကူ.အနံ့ရ၏။
ထိုအနံ့ရရှိသောလူသားတို့ကိုလည်း ထိုမိစ္ဆာတို့က..အမဲသားကိုကြိုက်နှစ်သက်မက်မောသလို ထိုအသားစားထားသောလူသားတို့ကိုလည်းမက်မောကြ၏..ကြိုက်နှစ်သက်ကြ/
သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအနံ့ ၊ အစားအသောက်သည် မည့်သည့်လူ၊ မည့်သည့်နေရာ၌ရှိသည်ကို အလွယ်တကူသိကြ၏
ထိုအသားကိုစားသုံးသော.လူသားတို့၌လည်း ထိုမိစ္ဆာအပေါင်းက မစားတဲ့သူများထက် လွယ်ကူစွာနှောက်ယှက်နိုင်၏ လွယ်စွာတိုက်ခိုက်ဖြတ်စီးနိုင်၏ ာထိုအသားကိုစားသုံးသောသူတို့မှာလဲ ကံနိမ့်၏..ဥာဏ်နိမ့်၏။
ထိုကြောင့်ပင်..ဤနွားသား.ခေါ်. အမဲသားကို ာသူတော်ကောင်းတို့လောကီပညာရှင်တို့ တရားအားထုတ်သောအရိယာသူတော်စင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကရှောင်ကျဉ်၍..မစားကြပေ။ အာဆိပ်.လျှာဆိပ်.ညံ့သည် ဩဇာအာဏာစက်ညံ့သည် ပြောဆိုသမျှ ၊ ကြံစည်သမျှ၊ပျက်စီစေတစေသည်/
လာဒ်ပိတ်တတ်သည်။ ထိုကြောင့်ဖြစ်ပါ၍ သူတော်ကောင်းများအနေဖြင့် မစားကြပါနဲ့လို့ပြောဆိုအမိန့်ပေးခွင့် ပိတ်ပင်တားဆီးခွင့်မရှိပါသောကြောင့် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အသိဥာဏ်လေးဖြင့် ဆင်ခြင်သုံးသပ်၍.သတိတရားများရှိကြပါစေ။
ကြက်ဥပြုတ်သည် ဘဝမှ ဝဘ်ဆိုဒ် ရေးသားသူ တစ်ယောက် အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲသူ..
ဘယ်အစိုးရတက်တက် ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတာဆိုသူများ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက မိန့်ကြားထားတာလေး..
ချက်ပြုတ်သည့်အခါ မခက်ခဲတော့အောင် အမွှေးမဲ့ကြက်တွေကို...
အိမ်ရှင်မများ သိထားသင့်တဲ့ ဒီဂျစ်တယ် မီးဖို...
ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး သူတောင်းစား (၅)ဦး..
တစ်နေ့မှာ အလှသုံးမျိုးပြောင်းတဲ့ သုံးပန်လှမင်းသမီးရဲ့...
ကိုဗစ်ဖြစ်ချိန် နွားနို့သောက်လို့ ချွဲထပြီး...
ဆေးလိပ်သောက် ကွမ်းစားသူများ သိထားသင့်တဲ့ ဆေးရွက်ကြီး...